China Anti Kuchembera 11 mitsara HIFU vagadziri uye vanotengesa | Kunaka
Pakarepo maitiro ekurwisa kukwegura kuunyana kubvisa HIFU system
Mvumo yemitsetse gumi neimwe mitsara Technology yekutanga mugadziri
Kusimudza ganda kusiri-Kuvhiya kwave kumwe kunonyanya kutsvaga kurapwa uye HIFU ndiyo tekinoroji yazvino isiri yekuvhiya kuti ibudirire munzvimbo ino muchikamu chimwe chete! Inotarisa yega kusimudza Brow, Jowl kusimudza mutsara, Nasolabial fold kuderedzwa, Periorbital kuunyana kwemakwenzi uye kusimbisa kweGanda, kumutsidzira uye muviri wese kuonda.
Meno HIFU inoshandisa High Intensity Inotarisa Ultrasound tekinoroji, kuitira kuti ganda reganda rigadzire iro rinopisa, uye riite-inomhanya-mhanya maseru ekuchinjisa collagen kupisa kwakadai hakuzokuvadza Epidermis, nekuti kurapwa nekukurumidza uye kunanga kwekuwana nzvimbo yekurapa mukati me0. -0.5 masekondi, pasina kubata iwo akakomberedza tishu uye inogona kupfuudzwa direclty kune yekumberi tendon membrane system (SMAS).
Iyo HIFU muchina inogona kuitwa yakasimba ganda uchidhonza iyo mhasuru yakatetepa, yakatetepa kumeso kumusoro kune inofambira mberi mhedzisiro. Chii chinonzi SMAS? Simudza mashandiro pari zvino nachiremba anovhiya epurasitiki anoita oparesheni nhete, iyo SMAS rukoko, inova (zvapamusoro musculoaponeurotic system, inonzi senzvimbo yefascia pakadzika kweganda ingangoita 4.5mm, mafuta epasi uye mhasuru.
Pashure: 100% Simbi zvinhu 11 mitsara HIFU yechiso nemuviri
Zvadaro: Inotakurika yemukadzi hifu